नेकपाभित्र गुटैगुट, कस्को कोसँग सम्बन्ध ? «
नेकपाभित्र गुटैगुट, कस्को कोसँग सम्बन्ध ?
प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०७५, सोमबार ०२:५६
राजनीतिमा गुट र फुट हुनु नौलो कुरा होइन । तर यसले सही ढंगले प्रयोग गर्न नसक्दा पार्टी र देशलाई ठूलो हानी पुग्ने हुन्छ । यो राजनिीतिक गुट पछिल्लो समय नेपाली कम्युनिष्टमा ठूलो रोगको रुपमा हाबी भएको देखिन्छ । झन अहिलेको सत्तासिन कम्युनिष्ट पार्टी गुटले गर्दा ठूलो समस्यामा परेको। गएको महिना नारायणकाजीले पार्टी प्रवक्ताबाट राजीनामा गर्नु, झनाथको असन्तुष्टि सतहमा आउनु, माधव कुमार नेपालले केही न केही बोलेकै हुनु र अन्य नेतापनि प्रत्यक्ष र अप्रत्इक्ष रुपमा आफना असन्तुष्टि पोख्नुले गुटको बधmेल्ती संकेतहरु हुन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
नेकपाभित्र दृश्य/अदृश्य रूपमा ६ नेता वरिपरिका गुट सतहमा देखिएका छन्। त्यसभित्र पनि अन्य उपगुट उत्तिकै छन्। प्रारम्भमा पूर्वघटकका अलग समूह र गुट देखिनु स्वाभाविक हो। तर पूर्वघटकभित्रैका पुराना गुटले एकतापछि समेत निरन्तरता पाइरहेका छन्। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गुट सबैभन्दा बढी बलियो छ। उनको गुटका नेताका अरुका तुलनामा एकढिक्का छन्।
महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्यहरू सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञावाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, विष्णु रिमाल, केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, गोकुल बास्कोटा, भानुभक्त ढकाल, राजन भट्टराईलगायत नेताहरू ओली ‘क्याम्प’का सारथि छन्। सात प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव गरी २८ पदाधिकारीमध्ये ओली पक्षका १० नेताले जिम्मेवारी पाएका छन्। यस हिसाबले पनि ओली पार्टीमा हाबी छन्।
प्रचण्ड्को छुटै गुट छ भने बादलको छुट्टै गुट छ । त्यस्तै गरी माधब नेपालको छुट्टै गुट छ भने झालनाथ ख नालको को पनि छुट्टै देखिन्छ । त्यस्तै गरी सानो गुट नारायाण काजी श्रेष्ठ र बामदेब गौतमको पनि रहेको छ । कस्को गुठ भित्री रुपमा सबैलाई थाहा भए पनि बाहिर नेकपाको र एसियको तेश्रो ठुलो दलको दम्भा सबै सँग रहेको छ । यस गुटहको कारणले गर्दा नै भित्री रुपना निकै धारायासी रहेको देखिन्छ । जसको कारण अहिले सम्म प्रदेश, जिल्ला र गाउ नगर कमिटी बन्न सकेको छैन ।
विपक्षी गठबन्धनको संयुक्त वक्तव्य – सरकारको जताततै हस्तक्षेप बढो, देश गम्भीर सं’कटतर्फ उन्मुख [विज्ञप्तीसहित]
विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब दिने र धम्की
प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि मन्त्रीहरू झन्डा छोपेर बालुवाटार पुगे
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गरेर २० मन्त्रीलाई
अब बेलायत विज्ञानमा सुपरपावर बन्ने, प्रधानमन्त्रि बोरिस जोन्सनको घोषणा
मुन्धुमस्टार डटकम — बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बेलायतलाई ‘विज्ञानको सुपरपावर’ बनाउने भन्दै योजना सार्वजनिक गरेका